CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 15:45 today to 16:34 today, HD Digital TV Reduced Quality from 15:45 today to 16:34 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 15:45 yesterday to 16:34 yesterday, HD Digital TV Reduced Quality from 15:45 yesterday to 16:34 yesterday. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 15:45 on 13 Oct to 16:34 on 13 Oct, HD Digital TV Reduced Quality from 15:45 on 13 Oct to 16:34 on 13 Oct. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 16:48 today to 17:04 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 16:48 yesterday to 17:04 yesterday. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 16:48 on 22 Oct to 17:04 on 22 Oct. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 13:28 today to 14:47 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 13:28 yesterday to 14:47 yesterday. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 13:28 on 02 Nov to 14:47 on 02 Nov. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Possible service interruptions [DUK]